Wararkii ugu Dambeeyay ee Ganacsiga Caalamiga- Bogga 85 ee 85 - Alietc.com
Waxaa laga yaabaa 20, 2020 0 comments
Guar Gum For Bad Neefsashada
Xabkaha Guar ee Neefta Xun Xanjada ciridka Guar muddo dheer ayaa lagu yaqaanay inay gacan ka geysato ciribtirka candida iyo finanka. Daraasadaha cilmi baaristu waxay kaloo muujiyeen inay leedahay waxyaabo bakteeriyada ka hortaga oo aad u xoog badan, taasoo kuu oggolaaneysa inaad iska ilaaliso koritaanka bakteeriyada keenta neefta xun. Maadadan ayaa laga sameeyay abuurka […]Read More
Isbeddelada Pistachio Pistachios waxay soo jirtay in muddo ah maantana, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay cunno aad u fiican. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo loo yaqaan 'pistachios' nooc walbana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad sameysid pistachio aad jeceshahay shakhsi ahaaneed, ma ahan wax adag inaad ka hesho suuqa. Ka […]Read More
Waxaa laga yaabaa 19, 2020 0 comments
Dawooyinka Alaab-qeybiyeyaasha - Maxaa Isbedelaya?
Dawooyinka Alaab-qeybiyeyaasha - Maxaa Isbedelaya? Laga soo bilaabo 2020, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa joojiyay shixnad badan oo daawo cayriin ah oo loo waday Malaysia oo laga keenay Mareykanka. Sharcigan cusub dhowaan waa la rogay, laakiin lama oga goorta rarku mar kale bilaabi doono inuu ku soo qulqulo dalkan. Soo saarayaasha badankood ee […]Read More
Waxaa laga yaabaa 4, 2020 0 comments
Wanaaga, Xun, iyo Foolxumada Suuqgeynta Emailka
4ta Muhiimka ah, laakiin Aad Aasaasiga u ah Suuqgeynta Dijital ah
Nitty Gritty of SEO: 3 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Hormarin Karo Shabakadaada - Aqoonsiga Khubarada